UQuevedo noGóngora bayaqhubeka nezabo kuTwitter | Uncwadi lwangoku
UAlex Martinez | | Imbali yoncwadi, Izaziso
Imizobo yeGóngora kunye neQuevedo.
Enye yeempawu ezizezona zibalulekileyo eziphawula uncwadi lwethu yile ubudlelwane phakathi kwababhali abohlukeneyo abaye baphawula iindawo ezahlukeneyo zamazwi ethu.
Ngokusengqiqweni, nangona le nyaniso ingeyonyani kuncwadi lwethu, yabonwa ngobukhulu obubaluleke ngakumbi. Ngoko ke, akukho amatyala amaninzi apho, kwakule dolophu inye, umzekelo, bahlala ngaxeshanye abalinganiswa abanjengoLope de Vega, uCarderón de la Barca, uMiguel de Cervantes, iGóngora okanye uQuevedo.
Kwezi zimbini zokugqibela, ubudlelwane babo bokuzondana kunye nokungcikivwa kwabo rhoqo kunye nokungafaneleki okwenziwe kubomi babo bonke kunokuba kungaziwa.. Ubudlelwane obuzinzileyo obuye behla ngexesha lethu ngenxa yeevesi ezinikezelweyo omnye komnye kwaye eziye zaba yimfuneko ukuba sifuna ukuthetha malunga nexesha legolide laseSpain.
Kubo bonke abo baziva benconywa ngokufanayo nam kwezi zinto zimbini zoncwadi lwethu kwaye bamangaliswe ngamagama abazinikezele omnye komnye, Ngaba, namhlanje, ungaqhubeka nokonwabela iQuevedo kunye neGóngora elungiselelwe le nkulungwane yethu kwaye zibekho kolunye uthungelwano olubaluleke kakhulu lwasentlalweni olukhoyo namhlanje.
Bebeza kuba njani aba bantu babini ukuba babenabo Twitter? Ewe, iiprofayili ezimbini zale nethiwekhi zijolise ekubuyiseleni uQuevedo kunye noGóngora kwixesha lethu, kwi-satire nakwimbono yam eqaqambileyo, ukuphawula ngemeko yangoku kunye nesimbo sombhali ngamnye ngelixa, ngokusengqiqweni, zombini ii-tweets zinikezelwe «ziyathandeka» Ke ngokungaphulukani nomkhwa wakhe wesiqhelo.
@QuebeboVillegas kunye @Gongora_Revixit, Ngale ndlela uya kuzifumana ezi profayile, ngokoluvo lwam ziyindlela entle yokutsala omncinci kunye nomncinci, kwenye yezona ngxelo zinyani zoncwadi lwethu kunye nababandakanyekayo.
Kweli hlabathi libonakaliswa yimpembelelo epheleleyo yenethiwekhi yoluntu kunye nokufumana amava enkcubeko ngendlela eya isanda ngokwanda. Ndiyibona intle kakhulu ukugcina ubunikazi bethu boncwadi busaphila kwesi sithuba.
Ngoko ke, Yonke into ebandakanya ukwenza ababhali abaziwayo njengoGóngora noQuevedo okanye imbali yoncwadi lwethu, nangayiphi na indlela, kufuneka ixhaswe kwaye ikhuselwe. Kusezandleni zethu, ke ngoko, ukuba amanyathelo anje anesisindo kunye nefuthe kwinethiwekhi kwaye ayisiyiyo leyo "IYoutubers" I-Simpletons enemidlalo ekrwada engaqondakaliyo etsala izigidi zabalandeli.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Izaziso » UQuevedo noGóngora bayaqhubeka nezabo kwi-Twitter
Uwabekile amagama eakhawunti gwenxa.
Umhlobo uVictor sele elungisiwe. Enkosi ngesilumkiso. Ukuba bendineiglasi zikaQuevedo, ngendiyibhale ngokuchanekileyo hehe. Konke okugqibelele.
UHaruki Murakami ufumene iMbasa yama-Andersen